C/raxmaan C/shakuur oo howgal Amni ku dhaawacmay Iyo Ciidamada NISA oo Gacanta ku dhigay Caawa (Faah-faahin) - Hablaha Media Network
C/raxmaan C/shakuur oo howgal Amni ku dhaawacmay Iyo Ciidamada NISA oo Gacanta ku dhigay Caawa (Faah-faahin)
HMN:-Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxeysa rasaas caawa saqda dhexe ka dhacday magaalada
Muqdisho, gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Wararkii ugu danbeeyay ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay galeen guriga siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame ee u dhow Garoonka diyaaradaha Muqdisho, halkaasoo howlgal amni loogu diray, balse ay ka ka hor yimaadeen ilaalada siyaasiga.
Wararka ayaa sheegaya inuu C/raxmaan C/shakuur dhaawac Fudud kasoo gaadhay iska hor imaadka, Halka wararka qaarna ay sheegayaan inuu Caafimaad Qabo, isla markaana ay ciidamadu qabteen, waxaana siyaasiga la wareegay ciidamada NISA oo howlgalka ka fuliyay guriga siyaasiga.
Xaaladda ayaa hadda degan iyadoo aanay jirin wax rasaas ah oo dhaceysa, wuxuuna iska hor imaadku qaatay muddo 10 daqiiqo ah oo rasaas xoog leh laga maqlay agagaarka Garoonka Muqdisho.
Lama oga cidda bixisay amarka lagu soo qabtay siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo caawa ku dhaawacmay howgalka ciidamada NISA, waxaase hadda xaaladiisa gacanta ka haya ciidamada, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Federaalka, wuxuuna hada ku sugan yahay xarunta Taliska Ciidanka Nabad sugida ee kuyaala Guriga Habar Khadiijo.